Nepal, Sri Lanka ary India dia miresaka momba ny fampiroboroboana ny fizahantany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nepal, Sri Lanka ary India dia miresaka momba ny fampiroboroboana ny fizahantany
Jolay 9, 2018
Nampiroborobo i Nepal tao anatin'ny sehatry ny varotra dia sy ny mpanjifa Fitsangatsanganana sy fizahantany (TTF), nokarakaraina ny 06 hatramin'ny 08 Jolay 2018 tao amin'ny Netaji Indoor Stadium sy Khudiram Anushilan Kendra, Kolkata, India. Ny fandraisan'anjaran'i Nepal amin'ny seho dia notarihan'ny Birao Fizahan-tany Nepal miaraka amin'ireo orinasam-pizahantany tsy miankina 6 (Enina) avy any Kathmandu sy orinasa 5 (dimy) avy any Mechi sy Koshi any atsinanan'i Nepal (Fanjakana No. 1). Talohan'izay dia notokanan'ny minisitry ny fiaramanidina sivily sy ny fizahan-tany, governemanta ny Repoblika Entim-bahoakan'i Bangladesh Andriamatoa Shajahan Kamal ny 06 Jolay 2018 teo amin'ireo olo-manan-kaja VIP avy any India sy ny firenena hafa, anisan'izany ny Consul General of Nepal any Kolkata, India Andriamatoa Eaknarayan Aryal. Nandritra ny kabary fanokafana Andriamatoa Aryal dia nilaza fa ireo firenena mifanila vodirindrina dia afaka manjaitra fizaran-tany fizahan-tany mba hampiroboroboana bebe kokoa ny fizahan-tany any amin'ny faritra.
Nandritra io foara io dia nisy ihany koa ny fihaonana an-tsokosoko teo amin'ireo tompon'andraikitra NTB sy ireo solontena VIP avy amin'ny fahefam-pizahan-tany samihafa misy an'i India sy ireo firenena hafa toa an'i Bangladesh sy Sri Lanka.
Nandritra ny fihaonana niarahana tamin'i Andriamatoa Pramod Kumar, Minisitra, Departemantan'ny fizahantany, Bihar ary ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny Birao Fizahan-tany any Sri Lanka, ny fifanakalozan-kevitra momba ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampiroboroboana ny Faritra Ramayana izay misy ny fanjakan'i Bihar sy Uttar Pradesh any India, Nepal ary Sri Lanka dia nitazona. Andriamatoa Mani Raj Lamichhane, talen'ny birao fizahan-tany any Nepal dia nanolotra soso-kevitra hamolavola ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiroboroboana ny fizaran-tany ary hamidy amin'ireo mpivahiny, mpikaroka ary ireo mety ho mpandeha.
Toy izany koa, nandritra ny fihaonana tamin'Andriamatoa Jayanta Bhattacharya, Tale Jeneraly Mpanampy (Varotra) an'ny Air India, nisondrotra ny olana amin'ny saran-dàlana amin'ny làlambe Kolkata - Kathmandu. Raha dinihina ny tombotsoan'ny mponina ao Kolkata sy ny fampielezan-kevitry ny governemanta Nepal VNY 2020, Andriamatoa Bhattacharya dia nilaza fa mety handinika ny fametahana ny saran-dalana izy ireo ary hijery ihany koa ireo fotoana mety hampiasana ny sidina isan'andro ao amin'ny sehatra raha toa ka mitombo ny fitakiana eo amin'ny tsena ary manatona ny Governemanta Nepal. Nifanarahana fa ny ezaka toy izany dia tsy hahasoa ny Air India ihany fa hisy fiatraikany tsara amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany any Nepal. Toy izany koa no hanatanterahana ny fanirian'ny olona any Bengal Andrefana hitsidika an'i Nepal fa tsy ho any amin'ny toeran-kafa mitovy amin'izany. Ny Air India dia miasa sidina efatra isan-kerinandro amin'ity sehatra ity.
Tamin'ny fotoana hafa dia nihaona tamin'i Andriamatoa Cyril V. Diengdoh, talen'ny fizahan-tany, Meghalaya Andriamatoa Lamichhane ary niresaka momba ny fizahan-tany sy ny fifanakalozana kolontsaina eo amin'i Meghalaya sy Nepal. Nozaraina ihany koa ny olana momba ny fampiroboroboana ny tranokala Meghalaya sy Nepal, ny fifanakalozana hevitra, ny fitaovana ary ny teknika amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany. Andriamatoa Diengdoh dia naneho ny tombotsoany hanitatra ny fanohanany avy any Meghalaya amin'ny fampiroboroboana ny fampielezan-kevitra Visit Nepal 2020.
TTF Kolkata no India tranainy indrindra ary iray amin'ireo fampirantiana fivezivezena be olona indrindra any India. Miaraka amin'ny fitomboan'ny lanjan'ny tombotsoan'ny Outbound sy Inbound any Azia Atsinanana sy Andrefana Andrefana, izy io dia vavahady manan-danja ara-tetika ho an'ny indostria. Hatramin'ny 1989, dia manome sehatra marketing isan-taona sy ny fotoana ahafahana mifandray amin'ny varotra dia any amin'ny tanàna lehibe.
Ny TTF Kolkata 2018 tamin'ity taona ity dia nanatri-maso ny fandraisan'anjaran'ny fampirantiana 430 mahery avy amin'ny fanjakana 28 sy firenena 13 izay nivory tao amin'ny efitrano feno hipoka tao amin'ny kianja mitafon'i Netaji sy Khudiram Anushilan Kendra nandritra ny telo andro.
Kolkata, tanàna fampiantranoana ny TTF, izay tanàna manankarena fahatelo indrindra taorian'ny fananan'i Mumbai sy New Delhi manana herijika goavana ho tsenan'ny loharanom-baovao ho an'i Nepal. Noho ny akaiky azy dia afaka mioty tombony be ny atsinanan'i Nepal raha toa ka azo ifandraisany tsara amin'i Bengal Andrefana ity faritra ity. Ireo mpitsangatsangana koa dia afaka mahazo antoka an'io akaiky io amin'ny fivezivezena amin'ny fifamoivoizana an-tserasera, ahafahan'izy ireo miditra an-tserasera Mpizara proxy VPN Indiana raha tany Nepal.
Raha ny fahatongavan'ireo mpitsidika dia voaporofo fa sehatra sahaza ny TTF Kolkata tsy ho an'ny fifandraisana B2B ihany fa ho an'ny fampiroboroboana ny mpanjifa an'i Nepal. Ny isan'ny mpitsidika dia mbola tsy navoakan'ny mpikarakara tamim-pomba ofisialy, fa ny mpitsidika kosa nitangorona tao amin'ny kizo Nepal noho ny fampahalalana takian'izy ireo momba ny fikasan'izy ireo hitsidika an'i Nepal ary koa amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisan'izy ireo ara-barotra sy ny fanavaozana ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpiara-miasa Nepaley. Nizara ny tombam-bidy fampiroboroboana ny tranoheva Nepal ary misy ny sarintany fizahan-tany, afisy ny Mt. Everest, Muktinath, Pashupatinath & Lumbini miaraka amin'ny entana fahatsiarovana. Ilay 5,000 miloko Asehoy kitapo itondrana miaraka amin'i Nepal Brand nozaraina tamin'ny alàlan'ny kaontera an'ny Nepal Tourism Board ary avy amin'ny Birao fisoratana anarana an'ny TTF dia iray amin'ireo manintona hafa ary ny fifampiresahana tao an-tanàna nandritra ny hetsika 3 andro ary olona an-jatony no hita teny amin'ny tsena voalohany tao Kolkata niaraka tamin'ny ' kitapo Nepal marika.
Ny hetsika nandritra ny telo andro dia nofaranana ny Alahady 08 Jolay 2018 niaraka tamin'ny lanonana mari-pankasitrahana amin'ny sokajy samihafa. Nahazo ny 'Most Innovative Decoration Award' i Nepal noho ny firavahan'izy ireo amina toerana misy azy miaraka amin'ireo sary maro karazana sy miloko misy ny toerana itodiana sy ireo vokatra. Ankoatr'izay, Andriamatoa Lamichhane, dia nomen'ny mpikarakara ny voninahitra hanome loka ireo mpandray anjara amin'ny TTF. Andriamatoa Khem Raj Timalsena, tompon'andraikitra ambony dia nahazo ny loka tamin'ny anaran'ny ekipa Nepal. Nankasitraka ny ezak'Andriamatoa Timalsena ireo orinasa mpandray anjara mba hahatonga ny tranohevan'i Nepal ho afaka handray ny "mari-pankasitrahana haingo indrindra".